ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: December 2011
ကန်ရေပြင်လိုကြည်လင် အေးချမ်း....နှလုံးစိတ်ဝမ်း ချမ်းမြေ့ ကြပါစေသတည်း....
Posted by peter kyaw | at 8:08 PM |3comments
ပျော်သလားဟေ့ မောင်တို့ ရေ...
ပျော်စရာတွေ့ ယင်၊ သိမြင်ကြားသိရယင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကို မစဉ်းစားပဲ စိတ်လွတ်
ကိုယ်လွတ်ပျော်တတ်ကြတာ လူ့ သဘာဝပါပဲ....
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး...အင်တာနက်မှာတွေ့ မိလို့ စိတ်အပန်းပြေစေဖို့ တင်ပြပါတယ်...
ခရစ်သက္ကရာဇ်ရဲ့ နှစ်သစ်မှာ သတိလက်လွတ်အပျော်မလွန်စေဖို့ သတိပေးယင် အားလုံးပဲ....
Posted by peter kyaw | at 6:41 PM |4comments
Labels: gif for fun
ကျွန်တော် ၆ နှစ်သားအရွယ်လောက်ရောက်တော့
ကျွန်တော်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်၊ ရှာရှာဖွေဖွေ၊ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ၊ ကတ်သီးကတ်သတ်မေးသမျှ
ကျွန်တော် ၈ နှစ်သားအရွယ်....
အဖေတို့ ခေတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခေတ် အခြေခအနေချင်းမတူတော့ဘူးလေဗျာ...
အဖေဟာ ရှေးဟောင်းအဖိုးကြီး၊ ရှေးကျတဲ့ အဘိုးကြီးလို့ ထင်လာမိပါတော့ တယ်....
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် ...မာန်အတက်ဆုံးအချိန်....
အဖေဘာတစ်ခုမှ အသေအချာသိတာမရှိဘူး...လို့ ထင်ခဲ့ ပါတယ်....
ကျွန်တော့် အသက် ၂၅ နှစ်ရောက်တော့ ....
နည်းနည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်လာပါပြီ.... ဒီကိစ္စ ( ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ နေ၇တဲ့ ပြဿနာ ) နဲ့ ပါတ်
သက်လို့ အဖေသိနားလည်နေပါလား...ဒါပေမယ့် လည်း အဖေ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ဒါမျိူးသိတာ
အသက် ၃၀ အရွယ်မှာတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အဖေ့ ဆီက အကြံအဥာဏ်တောင်းယင်
အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်....
နောက်ဆို ဘယ်ကိစ္စမဆို အဖေ့ ကိုမတိုင်ပင်၊ မမေးမြန်းပဲ တစ်ဇွတ်ထိုးမလုပ်တော့ ဘူး...
အသက် ၅၀ အရွယ်....
ဒီကိစ္စမှာ ငါ့ နေရာမှာ အဖေသာဆိုယင် ဘယ်လိုများလုပ်မလဲ....
ကျွန်တော် အသက် ၆၀....
အဖေဟာ တစ်ကယ့် ပညာဗဟုသုတနဲ့ ပြည့် စုံကြွယ်ဝလှပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ငါသူ့ ကိုဘယ်တော့ မှ အလေးမထားခဲ့ ဘူး... အခုတော့ အဖေ့ ကို
ရှိစေချင်လိုက်တာ...အဖေသာရှိယင် သူ့ ဆီက ငါအများကြီး လေ့ လာသင်ယူနိုင်မှာ
ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ သည့် ဖခင်ကြီးသို့ အမှတ်တရ....
Posted by peter kyaw | at 4:01 AM |5comments
Labels: pictures: general knowledge
ဂီလ်လင်ဟမ် အသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမားဖြစ်သူ ခရစ်ဝှဲပ်ဒေးလ် တစ်ယောက် လွန်ခဲ့ သည့် ဘောက်
ဆင်းဒေးနေ့ က ကရောလေးတွင် ပြိုင်ဖက်အသင်းအား ၂ ဂိုး၁ဂိုးဖြင့်နိုင်ခဲ့ သည့်ကစားသည့် ပွဲတွင် တစ်မူ
ထူးခြားစွာဖြင့် ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့ ပါတယ်...
ဖြစ်ပုံကတော့ တစ်ဖက်အသင်းမှကစားသမားတစ်ဦး ၎င်းထံမှဘောလုံးအား ဖျက်ထုတ်ခဲ့ရာတွင် ၎င်း၏ဝှေး
စေ့ အား ထိခိုက်မိပြီး ကွဲထွက်သွားခဲ့ ရပါတယ်....
၎င်း၏ကလပ်အသင်း အနေဖြင့် ကိုးပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရစေခဲ့ သည့် အဆိုပါနေ့ က ကစားပွဲ၏ နောက်ဆုံး
အချိန်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ခဲ့ သည့် အဖြစ်အပျက်ကြောင့် အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကစားသမား၏ဒါဏ်ရာအား ပြု
စု ကုသပေးခဲ့ ပါတယ်....
" အဲဒါဟာ တော်တော်အဖြစ်ဆိုးတဲ့ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.... တော်တော်ကို၊ တစ်ကယ်ပဲစိတ်
မချမ်းမြေ့ စရာကောင်းလှတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ....သူ့ အနေနဲ့ တော်တော်ကို ထိခိုက်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်....
သူ့ ဇနီးဖြစ်သူလည်း ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲရမှာ အသေအချာပါပဲ...." လို့ အသင်းမန်နေဂျာ
အန်ဒီ ဟက်ဆင်သလာ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
၀ှဲပ်ဒေးလ် တစ်ယောက်တော့ဖြင့်လာမည့် သောကြာနေ့ တွင် ဒါဂင်ဟမ် နှင့် တံတားနီ အသင်းတို့ ကစား
ကြမည့် ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ မသေချာတော့ ကြောင်းဖြင့် လည်း အသင်းမန်နေဂျာ ဟက်ဆင်သလာ
က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
Gillingham winger Chris Whelpdale suffered an unusual injury in the 2-1 Boxing Day win at Crawley, asatackle split open his scrotum.
The 22-year-old was given treatment to the wound, which occurred late on inavictory that extended the club's winning run to nine games.
"It'sahorrific injury," boss Andy Hessenthaler said. "It's absolutely disgusting. He's going to be very sore, and I'm sure his wife won't be too happy either."
Hessenthaler confirmed that Whelpdale is nowadoubt for Friday's game with Dagenham & Redbridge.
Posted by peter kyaw | at 9:47 AM |2comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှက ခွေးနဲ့ မျောက် သံယောဇဉ်....
ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံအရှေ့ မြောက်ပိုင်းမှ မြို့ ကြီးပြကြီးနှင့် ဝေးကွာလှသည့် ကျေးလက်တောရွာတစ်ခုမှ ခွေး
တစ်ကောင်ဟာ မျောက်ကလေးတစ်ကောင်အား ကျန်းမာရှင်သန်လာအောင် နို့ တိုက်ကျွေးနေခဲ့ သဖြင့် လူ
အများ စိတ်ဝင်စားကာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေပါတော့ တယ်...
အဆိုပါမျောက်ငယ်အား (၎င်းတို့ ၏စိုက်ခင်းများအားဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသည့် မျောက်အုပ်နှင့် အတူပါလာ
သည့် အတွက် ) စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသည့် ရွာသားများထံမှ ကယ်တင်ထားခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
လူပေါင်းများစွာဟာ ဘစ်ရှဝါနတ်ပုရ် ရွာကလေးမှ ခွေးပိုင်ရှင် ရှီပါရီဇာ ရဲ့ နေအိမ်သို့ လာေ၇ာက်ကာ ခွေး
သားပေါက်ကလေး ၇ ကောင်ရှိသည့် ခွေးမကြီး မင်းတူ နှင့် မျောက်ကလေးတို့ ၏ ထူးခြားဆန်းကျယ် စွာ
သံယောဇဉ်တွယ်ကာ ခွေးသားအုပ်မကြီးအတွင်း နေထိုင်လျှက်ရှိသည်ကို ကြည့် ရှုနေကြပါတယ်...
အဆိုပါမျောက်ငယ်အား ၎င်းတို့ ၏စပါးခင်းကို လာရောက်ဖျက်စီးသည့် မျောက်အုပ်ကြီးထံမှ ရွာသားများ
ဖမ်းဆီးခဲ့ စဉ်က ရက်ပိုင်းမျှသာ အရွယ်ရှိသေးတာဖြစ်တယ်လို့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ဗြိတိသျှ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနွယ်
ဖွား ရီဇာ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
" (အိမ်ရောက်လာပြီး) နောက်နေ့ မှာပဲ မျောက်ငယ်လေးဟာ တစ်ခြားခွေးသားပေါက်ကလေးများနှင့် အတူ
မိခင်ခွေးမကြီးထံမှ နို့ ကိုစို့ ပါတော့ တယ်...
အဲဒီကတည်းကစပြီး ခွေးမကြီး မင်းတူ ကလည်း သင်းကွဲမျောက်ကလေးကို မိမိရင်သွေးပမာ မွေးမြူခဲ့ တာ
ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ခွေးမကြီးနှင့် တစ်ကွ ခွေးသားပေါက်ကလေးများနှင့် အတူ အိပ်စက်လေ့ ရှိပါတယ်..." ဟု
" တစ်စုံတစ်ယောက်ယောက်ကများ မျောက်ကလေးကို နောက်ပြောင်ခဲ့ ယင်လည်း ခွေးမကြီးမင်းတူ က
ဒေါသတစ်ကြီးနဲ့ ဟောင်ပါတယ်... မျောက်ကလေးဟာ ခွေးမကြီးကျောပေါ်ကနေသွားလေရာတစ်ရွာလုံး
ကျွန်တော်မျောက်ကလေးကို တွေ့ ခဲ့ တာအခုဆိုယင် တစ်လရှိခဲ့ ပါပြီ...ဒါပေမယ့် တောထဲပြန်သွားမယ့် အ
ရိပ်အယောင်၊ လက္ခဏာတောင်မပြပါဘူး..." လို့ လည်း သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
A dog in remote northeastern Bangladesh has becomeaminor celebrity by breastfeedingababy monkey back to health after it was rescued from angry villagers.
Scores of people have flocked to Shipar Reza's house in Bishwanathpur village to witness the unusual addition to the litter of his dog Mintu, who is also mother to seven puppies. The baby monkey was justafew days old when villagers seized it fromatroop of monkeys that had damagedapaddy rice field, said Reza,aBritish-Bangladeshi.
'The next day, the baby monkey joined the other puppies and began suckling with Mintu. Since then Mintu has adopted the abandoned monkey as her own baby. It now sleeps with Mintu and other puppies,' he said.
'Mintu barks and reacts angrily if anyone disturbs the baby monkey, which travels around the village by riding on Mintu's back. It's nowamonth since I found the monkey, but she shows no sign of going back to the wild,' he said.
Posted by peter kyaw | at 9:01 AM | 1 comments
Labels: news: skynews.au
အာဖရိကမှာပဲ ဒီလိုရှိတယ်အစ်ကို... ( ၂ )
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ စကားလုံးပေါင်းတစ်ထောင် ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုကြတာမို့ စာရေးဖို့ စိတ်မပါ...
အချိန်မရတဲ့ အခါမျိူး ဒီလိုပုံလေးတွေပဲကြည့် ပြီး ဖြန့် ထွက်၊ ဖြည့် စွက်တွေးကာ အပန်းဖြေကြပါကုန်...
အာဖရိကမှာပဲ ဒီလိုရှိတယ်အစ်ကို ( အစ်မများလည်းပါပေသပေါ့ ....) လို့ စိတ်ကူးအတွေးနဲ့ အမည်ပေး
တိုက်ရင်းတိုးချဲ့ ...တိုးချဲ့ ရင်းတိုက်....
နွားဆွဲတဲ့ ...တိုယိုတာ ထော်လာဂျီ...
ဆီဖိုးလည်းမကုန်၊ လေထိုးကျွတ်ဖာ၊ တာယာကွဲစရာ၊ လဲစရာလည်းမလိုတဲ့ ဆိုင်ကယ်...
သူ့ အရပ်နဲ့ သူ့ ဇတ်နဲ့ ကတော့ ဟုတ်လို့ ...စင်္ကြာဝတေးမင်းလို့ များထင်နေသလားပဲ....
ကျိူက်ထီးရိုးက လူအထမ်းသမားတွေမြင်ယင် အတုယူနေဦးမယ်...
သြော်...အပျင်းပြေ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် သေနတ်ပစ်တတ်ကြပုံရပါတယ်....
ဘာကြောင့် မဖွင့် သလဲဆိုတော့ ပိတ်ထားလို့ ပါတဲ့ ခင်ဗျ...
Posted by peter kyaw | at 7:47 AM |2comments
နေထိုးတဲ့ အခါနေပြောက်ကလေးတွေ...ရေချိူးတဲ့ အခါ ရေပေါက်ကလေးတွေ...
ထိနေတာတောင်မှ စိတ်ထဲမှာသ၀န်တို ...မနာလိုဖြစ်မိအောင်...ချစ်မိရပါတယ်......
ချစ်သူ့ မျက်နှာ...ကိုယ့် အတွက်သာဖြစ်ရပါ့ မယ်...
မီးဖွားနေစဉ်အတွင်းဇနီးဖြစ်သူ၏ မျက်နှာဖုံးအ၀တ်အား ဖယ်ရှားခဲ့ သည့် သားဖွားမီးယပ်သူနာပြုတစ်ဦး
အား ၀င်ရောက်ထိုးကြိတ်ခဲ့ သည့် မွတ်ဆလင်အမျိူးသား ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ထောင်
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ နာဆင်မီမုံး ဟာ သူ၏ဇနီးသည်အား ကလေးမမွေးဖွားမီ ပြုလုပ်သင့် ပြုလုပ်ထိုက်
သော အမျိူးသမီးအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများဆိုင်ရာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သူ ၀မ်းဆွဲဆရာမအား လိင်မှု
ဆိုင်ရာ ကျူးကျော်စော်ကားသူဟု စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ သည့် အတွက် မွေးခန်းထဲမှ မောင်းထုတ်ခံခဲ့ ရပြီးဖြစ်ပါ
အဲဒီနောက် မွေးခန်းပြတင်းမှန်မှတစ်ဆင့် သူနာပြုဆရာမ ကလေးမွေးဖွားဖို့ ပြင်ဆင်နေစဉ် ဇနီးသည်၏
မျက်နှာဖုံးအ၀တ်အား ဖယ်ရှားနေသည်ကို ၎င်းအနေနှင့် တွေ့ ရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူဟာ ချက်ထိုးထားသည့် တံခါးအား ဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ကာ သူနာပြုအမျိူးသမီး၏မျက်နှာအား ထိုးကြိတ်
ရိုက်နှက်ခဲ့ ပြီး ဇနီးသည်၏မျက်နှာအားဖုံးအုပ်ကာကွယ်မည့် အစ္စလမ်ဘာသာဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးအား ပြန်
ဇနီးသည်ဖြစ်သူမှ သားယောကျာင်္းလေးမွေးဖွားနေချိန်တွင် မီမုံး အား ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ မာဆေးမြို့ ရှိ ဆေးရုံ
မှ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက နှင်ထုတ်လိုက်ပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာ စော်ကားမှုအတွက် ဖမ်းဆီးလိုက်ပါ
မီမုံးအား ပြင်သစ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဆိပ်ကမ်းမြို့ မှ တရားသူကြီးက " သင်၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ထုံးတမ်း
စဉ်လာကျင့် ဝတ်များက အများပြည်သူ ( ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေး စသည့် ) ဆိုင်ရာ တရားဥပေဒထုံးတမ်း
များထက် (အမြဲတမ်း) ပိုပြီး သာလွန်လိုက်နာသင့် တယ်လို့ မယူဆနိုင်ပါဘူး..." ဟုပြောကြားကာ ၎င်းအား
လွန်ခဲ့ သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က ထောင်ဒါဏ် ခြောက်လ ကျခံစေရန်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ပါတယ်....
Posted by peter kyaw | at 6:59 AM |2comments
အာဖရိကမှာပဲ ဒီလိုရှိတယ်အစ်ကို... ( ၁ )
ဘာနဲ့ ပဲမမ...ဗလကြီးဖို့ အဓိကပါပဲလေ....
ကြောင်ဖြူပဲဖြစ်ဖြစ်...ကြောင်နက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြွက်မိဖို့ ကအဓိကပါပဲ လို့ ...
ဖိုးဖိုးကြီးတိန့် ရှောင်ဖိန်တောင်ပြောခဲ့ သေးတာပဲမဟုတ်လား...
သတို့ သမီး ....အသို့ နည်း...
ဒီလို ဒီလို....အထိန်းကုလားနဲ့ ဂိမ်းကစားကြတယ်...
(မိတ်ဆွေါ်ကြီးကိုမိုး ရဲ့ စကားငှားသုံးပါတယ်...)
အာဖရိကနည်း အာဖရိကဟန်နဲ့ ဆေးသုတ်ပြန်....
ကြံ့ ဖွတ် အဲလေ...ကြံ့ အတုနဲ့ ဆင်ကြံကြံ....
ရွှေပြည်ကြီးက လမ်းချိူင့် တွေကိုတော့ မှီနိုင်မယ်မထင်...
ခွေးအဆိုတာ ဒီလိုအကောင်မျိူးနဲ့ တူတယ်...
ဒီလိုမျိူး တင်နိုင်လို့ ကတော့ ....အုံနာအကြိုက်ပေါ့ ....
သူတို့ လက်ထဲရောက်တဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုပြီး ဒီပုံအပါအ၀င် တစ်ခြားဓါတ်ပုံတစ်ချိူ့ နဲ့ ပို့ စ်တစ်ခု
တင်ခဲ့ ဖူးပါတယ်...အခုတော့ မူရင်းအရပ်က အာဖရိကတဲ့ ...
( အမြတ်ကြီးစား ဂုတ်သွေးစုတ် လူတန်းစားပေါ့ ...)
ရွှေမည်းလို့ ခေါ်တဲ့ ရေနံလည်းကြွယ်ဝကြပါတယ်....
အသားအရောင်နဲ့ တော့ ဟပ်နေတာပါပဲ...
ကတော်များနဲ့ ကျွန်တော် မဟုတ်ရပါဘူး....
သူတို့ ဆီက ဖိုးကံကောင်းပါ....
Posted by peter kyaw | at 9:58 PM |2comments
Labels: photos : fun: knowledge
Posted by peter kyaw | at 7:44 AM | 1 comments